सबै छ हजुर ? « News of Nepal
तर, तीन किलोमिटरमा तीन ठाउँमा चेकिङ हुँदा भने हैरानी बेहोर्नुपरेको गुनासो गरेको धरहराले देख्यो। त्यस्तैमा एक दिन एक ट्राफिक प्रहरीले ब्लुबुक, लाइसेन्स, मापसे सबै छ हजुर भनेर सोद्धा यो धरहरा छक्कै पर्यो। अनि चालकले भन्यो– दुईटा मात्रै छ एउटा छैन। प्रहरी छक्कै पर्यो, लाइसेन्स छैन हो? भनी सोध्यो पनि अनि चालकले भन्यो मापसे छैन।
ती दुईको यो संवाद सुनेर धरहरा पनि छक्कै पर्यो। सोध्नेले पनि के–के छ भनेर सोधेको भए हुन्थ्यो, उत्तर दिनेले पनि मिलाएर दिएको भए हुन्थ्यो, बेकारमा समय बर्बाद गरेको देख्दा धरहराको मन अमिलो भयो। कि कसो पाठकवृन्द⁄ ‘समय खेर नफालौं अनावश्यक कुरा नगरौं’ भन्ने धरहराको सुझाव छ।